Izinduna zabesifazane | Imfashini | Amakhasi ombala wamahhala wokulanda
Kungani izicathulo ezithengiwe ngokuvamile zingagqoke?
Izinwele ezifanele - ngisho nokwanda
Izicathulo zase-Italy zinesiko eside
Yini eyenza izicathulo zase-Italy zihluke kwabanye?
Izicathulo zabesifazane shazi
Iningi labesifazane banezicathulo eziningi kunabesilisa, kodwa kungani behlala ekamelweni isikhathi eside ngaphandle kokugqoka? Isibonelo, inhlolovo ye-intanethi ithole ukuthi abesifazane banesilinganiso esiphindwe kabili sezicathulo njengamadoda.
Abesifazane Nezicathulo - Omunye wamapuzzli amakhulu endalo yonke
Ezingxenyeni zezingubo zabesifazane, ngokusho kocwaningo lwezicathulo zezicathulo ze-17, la madoda angama-8 kuphela. Kodwa kungani lokho? Yingakho abesifazane bekhetha ukuya ezitolo? Ngokuqinisekile lokhu kungenye yezizathu zokwehluka okukhulu, kodwa ngokusho kwengqondo kwengqondo kukhona imbangela ehluke kakhulu.
Kungani abesifazane abaningi bembatha isihlangu?
Akukhona kuphela ukuthi izicathulo zabesifazane zibonakala kanjani kulolu cwaningo, kodwa futhi nokuthi izicathulo eziningi azigqoke nhlobo. Abesifazane bathanda ukuya ezitolo, futhi uma befuna ukushintsha noma babe nezinkinga, ijaji lokuqala livame ukuthenga.
Ukuthi bavame ukuthenga izicathulo kodwa abazigqokothi kunzima indoda ukuba iqonde. Ngoba lezi namahloni kunalokho esitolo futhi ake imizwa nemizwelo yazo nangezinye izikhathi, njengalapho ngesikhathi umsebenzi noma ibhodlela likabhiya ngibukele ibhola bomshado wakho.
Ngokuthenga izicathulo ezintsha, bangakwazi ukuveza amaphupho abo nemizwa yabo. Lokhu kufana nokushintsha kwekhanda lezinwele, okuphinde kwenziwe njalo abesifazane uma befuna ukushintsha.
Kodwa kungani abesifazane abaningi bengagqoke izicathulo zabo? Ngokwesazi sezengqondo, inhloso yezicathulo akufanele ziwagqoke, kodwa ukuba uzuze futhi uzifake lapho zibuhlungu. Ukuzwa nje ukuthi umuzwa omusha ubaluleke kakhulu kubesifazane.
Ngaphezu kwalokho, isizathu sokuthenga izicathulo ezintsha, ukulandela umkhuba wamanje. Ngakho-ke kungenzeka ukuthi udumo ku-TV ogqoke isihlangu kusuka eqoqweni elisha lomklami owaziwayo futhi umkakho ufuna ukuba ncamashi lokhu. Nalapha futhi, amadoda nabesifazane bahluke, ngoba amadoda ngokuvamile akhathaleli ukuthi ngubani ogqoka lokho ku-TV nokuthi ngabe iqoqo elisha lifikile emakethe.
Esinye isizathu sokugqoka izicathulo zabesifazane ukuzivuza. Isibonelo, uma isisindo esibalulekile sinqobile, njengokudlulisa ngempumelelo ukuhlolwa noma ukufeza ukukhuthazwa.
Omunye angase azibuze ukuthi kungani izicathulo kuphela abesifazane abazithenga lapho befuna ushintsho. Lokhu empeleni kulula kakhulu ukuchaza, ngoba izicathulo ziyavumelana njalo, noma ngabe isisindo sande.
Izembatho, ijebe noma iziqongo, ngakolunye uhlangothi, kungase kube nzima kakhulu, okungaholela ekukhungathekeni. Ngaphezu kwalokho, azikho izindawo ezinenkinga ezesabekayo ezinyaweni. Futhi uma indawo engekho enhle kakhulu, izicathulo ezivaliwe zingathengwa.
Kungani amaphampu nezithende eziphakeme kangaka zithandwa kangaka?
Ngaphezu kwezinye izicathulo ezihlukahlukene, amaphampu nezithende eziphakeme ziyaziwa kakhulu ngabesifazane. Benza imilenze ibheke isikhathi eside futhi ilula, iqiniso elibaluleke kakhulu kubesifazane. Ngakho umqondo omncane wokuthakazelisa ufika, okufana nendlela izinkanyezi ezisemagumbini obomvu okungaqhubeki ngayo, ngisho noma kulesi simo kuningi lomgwaqo.
I-Italy ingenye yezizwe ezinomlando omude wokukhiqiza izicathulo. Ngokucophelela, izicathulo zase-Italy zikhiqizwa ngesandla. Ekuqaleni, kwakungamabhangqwana angashadile akhiqizwa abadutshulwa base-Italy abalula.
Izicathulo zase-Italy zibhekwa ngobuhle
Namuhla, zakhiwa umshini ngezizathu zezindleko, kodwa ngisho lezi pallets zisenziwa ngothando olujwayelekile lwesiNtaliyane nokunakekela izicathulo. I-clientele ivela kuzo zonke izingxenye zomhlaba. Uma ungafuni ukuthenga izicathulo ngqo e-Italy, ungahle uhlele ku-intanethi noma uzame amabhukwana asemqoka e-Italian, izimbadada, amasobhothi njll esitolo sangasese esikhethekile ekhoneni.
Izicathulo zase-Italy zihlale zihle kakhulu. Asetshenzwa ngokuphelele. Izikhumba ezikhethiwe zibuye ziqinisekise ukuthi impilo yerefri ende. Amamodeli amahle angaphelelwa yisikhathi aphelele kumsebenzi webhizinisi noma kusihlwa. Ngaphezu kwezicathulo kukhona izingubo ezikhethekile ze-chic ezivela e-Italy, okubhekwa njengezwe elivela emfashini. Ngakho-ke, ikakhulukazi izingubo nezicathulo zemikhiqizo eyaziwayo, njengeGucci noma iPrada zithandwa kakhulu. Kodwa futhi imibhangqwana kaSalvatore Ferragamo noBruno Magli yenza izinhliziyo zishaye ikakhulukazi abesifazane.
Imfashini yase-Italy ingachazwa ngamazwi ambalwa: izinga eliphakeme, elihle, elihle. Amakhasimende emhlabeni jikelele athembele ku-"Made in Italy" izicathulo. Esikhathini esidlule, lezi zicathulo zaziyisimpawu sendawo yangempela, amakhasimende namuhla abheke phambili ekusebenzeni okuhle. Ngesikhathi kwakungumhlonishwa ohloniphekile obonisa umnotho wabo nodumo ngezicathulo zase-Italy. Ngisho noma kunjalo, amamodeli ayenziwe ngesikhumba esihle kakhulu sezinyane noma sezimbuzi, okubhekwa njengento elula kakhulu, engacabangi futhi ephefumula.
Amadoda kanye nabesifazane bahlangana ne-Italy kodwa futhi banesithakazelo, izinzwa nokuheha. Ukuthi amakhasimende ukuzinqumela amateki lokugijima ballerinas flat, isigaba amaphampu noma sexy High Heels, zozela zonke, libonise uhlamvu ejwayelekile ye-Italy simelane. Izwe alizange limise ukukhula isikhathi eside. Izinqubo zokukhiqizwa kwe-State-of-the-art ziqinisekisa ukuthi izicathulo zingenziwa zikhiqizwa ezinyaweni zamakhasimende. Ngenxa esikhululekile isichathule ibhizinisi, amamodeli kusuka Italy kukhona nje kwafana iinhlangano ozungeze umhlaba wethu.
Ikhasi elihle lokubala lombala kubantu abadala - abesifazane